Ardey qaarkood loo diiday kuliyadaha Injineeriyada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Iranier utestängs från utbildningar
Ardey qaarkood loo diiday kuliyadaha Injineeriyada
La daabacay onsdag 22 juli 2009 kl 15.40
Ardeyda asalkoodu yahay Iiraaniyiin ayaa kuliyadaha injiriiniya ee dalkan Iswidhan loo diiday iney dhigtaan moodyiinka la xirriira tamarka nukliyeerka, arrintan ayaana timid markii booliska xagga aminiga u qaabilsan dalkan ee SÖPO la yiraahdo uu waraqad qoraal ah u diray shan kuliyood oo injineernimada qeybaheeda kala duwan lugu barto, warqadaaso lugu cadeynayo iney ogaadaan hanaanka waxbarasho ee u degsan Midowga Yurub marka ay timaado cuno qabateynta ka dhanka ah Iiraan.
Sida ku cad warqada ay booliska aminga Iswidhan u qaabilsan ayaa quseeya dhamaan wadamada Midowga Yurub taasoo ah in muwaadiniinta reer iiraan laga hortaago ama aaney dhigan maadooyinka qaaska kuwaasoo noqon kara kuwo gacan ka siiya hormarka Iiraan ay ku dooneyso hanashada hubka nukliyeerka ah.
Arrintan ayey saameysay arddayada la yiraahdo Sara oo iyada dooneysay iney dhameystirato maadada quseysa bu’ada atamka ee fisigiska kuliyada boqorteeyda Injineeriyada dalkan Iswidhan, hase ahaatee loo diiday sababo la xirriira jansiyadeeda iiraaniyadnimo.
“Waxaan ku soo qaatay wadankan qalin jebinta maadada atamka fisigiska kuliyada Shiraz ee Iiraan, waxaana doonayey inaan halkan ku dhameystirto, balse wey ii diideen waxaana ay I yiraahdeen aqoontada waa atamka fisigiska.”
Sara iyadoo hadalkeeda siiwadata ayey sheegtay iney runsan tahay diidmada loo diiday maadama ay dooneysay iney tahay mid salka ku heysa asalhaanteeda iyo cunoqabateynta diblomaasiyadeed ee Iiraan saaran. Ma waxey ka ka fareysa iney Iran iska joogta ama ay badasho maadooyinkeeda waxbarasho kuna soo laabato dalkan markale oo ay doorato maado kale?
“ Waxaan go’aansaday inaan badalo maadada oo aan ku badasho injineernimada korontoda” Sara waxey si kumeel gaar ahaan u dagan tahay gobolka Shiraz waxaana ay qorsheyneysa in sida ugu dhaqsaha badan ay ku soo laabato dalka Iswidhan.
Jaamacadaha durba fuliyey amarka Säpo ee maadooyinka qaar looga joojinayo ardeyda asalkoodu yahay Iiran ayaa waxaa kamid ah kuliyada Injineeriyada Chalmers ee ku taala magaalada Göteborg. Tallaabo taa lamid ahna waxaa ku dhaqaaqay kuliyada boqortooyada injineeriya ee Stockholm.
Dhinaca kale aqoonyahano iyo barafasooro ayaa siyaalo kala duwan u arka arrintan ka dhanka ah ardeyda reer Iiraan, waxaana ay qaarkood sheegen iney tahay arrin midabtakoornimo ah. Waxaa kamid ah dadkaasi Anna Sandström oo ah qareen xagga sharciga ah oo ka tirsan wasaarada taliinta sare ee dalkan. “ In la sameeyo arrin noocan ah waa mid noqon karta cunsurinimo waadix ah”
Janne wallenius waa barafasoor iyo dhaliye maadada fisigiska ee kuliyada ingineeriya Chalmers Göteborg, waxa uu sheegay in waxa ardeyda ay barayaan aanu shaqo kulaheyn hubka nukliyeerka.
“ Waxa aanu baraneyno ardeyda ee maadada quseeya waa mid guud oo aqoonta ah, mana ahan mid hormarsan oo la xirriirta teknoolojiyada”
Chirstophe Demaziere laftiisu waa muxaarado akhriye ka tirsan jaamacada Chalmers waana nin la qaba fikradaha aqoonyahanada kale isagoo arrintaas ka hadalaya ayuu yiri.
“Xaqiiqda ma jirto qatar la xirriirta kooraryadaasi, waana mid ka hadleysa dabqida shacab ahaaneed ee tamarta nukliyeerka, mana jirto isku xir ah waxa aan soo bandhigno iyo habka loo sameeyo sunta nukliyeerka”
Ugu dambeyntiina kuliyadaha injineeriya ee kala ah Lund, Luleå, Mälardal,Uppsala, Linköping, Chalmers iyo kuliyada boqorteeyda injineeriyada ayaa ah kuliyadihii loo diray warqadaasi loogu sheegayey ineysan areyda asalkoodu yahay reer Iiraan aan moodiiyinka fiisigiska iyo bu’atamka laga hor istaago. Mana ahan oo keliya waxa arrintani ay quseyso ardeyda reer Iiraan balse waxaa ku jira ardeyda kale ee iyagana u dhashay wadanka Kuuriyada waqooyi.